Seventh Pillar - Cunug Bambo Isku qarxiye ah oo la badbadiyay
Wiil 14 sanno jir ah oo degenaa dhulka qabaa’ilka gobolka Bajaur, waqooyiga bari ee Bakistaan, ayaa waxa uu sheegay in ay qabsadeen ciidamada Taliban si ay ugu soo xiraan bambo uu isku qarxiyo.
Qoraalka soo socdana waa warbixintiisii oo buuxda oo uu uga waramayo wariye BBC-da:
Shan ruux ayaa waxay iga soo qabteen meel la yiraahdo Bajaur. Wey i sireen. Waxay isku yiraahdeen aabahaa ayaanu qoorta ka jaraynaa.
Ayagii ayaan raacay laakiin markii aanu meeshii tagnay aabahay ma uusan joogin. Wey i xirxireen.
Waxay i yiraahdeen: Labo waxyaabood mid dooro. Inaanu madaxa kaa gooyno, ama inaad noqoto bam isku qarxiye.
Anigu waan diiday.
Waxaa sidoo kale joogay labo wiil oo da'dayda oo kala. Waxaana sidoo kale loo tababarayay inay bam isku qarxiyaan. Haddii aanu diidno gacamahay gadaal inta iskugu kaaya xiraan, indhahana naga daboolaan bilaabi jireen inay na garaacaan.
Maskaxday naga badaleen iyo waxay noo sheegeen inaan janada geli doono. Waxay nagu yiraahdeen waxaad heli doontaan ‘malab iyo macmacaan ilaahayna waa idinka raali ahaan doonaa. Waxaad guri qurux badan ka heli doontaan Janada.’
Waxaanu weydiisan jirnay inay noo ogolaadan inaanu tukano. Waxay noogu jawaabeen ’waxaadba u socotaan Janadii ee uma aad baahnid inaad tukato.'
Waxay si aad ah ii garaacayeen shan casho. Wax cunto ahna la ima siin. Intii ay i garacayeena ayaan waxaan ka yeelay inaan is qarxin doono. Waxay iga soo wadeen caruurtii kale.
Waxay i geyeen qol mugdi ah oo bilaabeen inay kaniini i siiyaan. Aniga waxaa la ii geeyay Maulvi Fakir [Madaxa ciidamada Talibaan ee Bajaur]. Is diyaarintaas balaaran ka dib waxay i dhaheen waa inaad tagtaa oo qabataa shaqadaada oo ah inaad isku qarxiso masaajidka.
Waxa uu iska ahaa masaajid iska caadi ah laakiin wadaadka masaajidka ayaa waxa uu ka soo horjeeday Talibaan, iyaguna waxay ku magacaabeen inuu cadawgooda yahay oo uusan ilaahay rumaysanayn, oo uusan muslim ahayn.
Waxay iga saareen shaarkii aan qabay oo garbaha ii geliyeen jaakad. Waxay lahayd labo meel oo la soo jiido oo feeraha ii saaran. Waxay igu yiraahdeen markii aad meesha takto waxaad tiraahdaa 'Allahu Akbar' [Ilaahay baa Weyn ] iyo markaas soo jiid labadaan xarig. Markaasay meeshii i geeyeen, oo i tuseen masaajidkii oo ay iga tageen halkaas.
Aniga meesha waa la i geeyay anigoo wareesan oo waxba aan dareemayn. Waxaa ii soo noqday dareenkaygii markii aan masaajidka imid. Waxaan arkay in wadaadku yahay qof nabadgelyo bixinaya oo iska maskiin ah, iyo waxaan kaloo arkay in masaajidku ay ka buuxeen kitaabo quraan ah. Anigu waxan kaloo arkay in ay dad badani halkaas ku tukanayeen. Markaasaan waxaan is dhahay dhamaanba dadkaani waa Muslimiin. Sidee ayaan midaas ugu sameeyn karaa? Waxaan go’aansaday inaan is qarxin oo banaanka ayaan u so baxay.
Waxaan hoos fadhiistay geed masaajika ku hor yaalay oo waxaan sugay intii ay dadku salaada ka soo baxayeen. Markaas ka dib waxaan dib ugu soo noqday Talibaan. Halkaasoo ay iigu yiraahdeen waxaad tahay ‘wiilkii sharmuutada’ oo ay i weydiiyeen sababta aan u soo noqday oo aan howsha u dhameeyn waayay.
Waxaan ku dhahay ma samayn karin waayo waxaa la baarayay dadka korkooda inta aanay meesha gelin ka hor. Waxay iga qaadeen suunkii bamka oo ay u dhiibeen Maulvi Fakir.
Wey i xir xireen laakin waxaan ku iri fursad kale i siiya anigaa sameeyn doonee. Waana i aamineen. Iyagaan si caadi ah ula joogay dhowr maalmood. Jidkaan tagay, waxaan helay gaadiid oo waxaan imid gurigeenii. Waxay iiga daba yimaadeen gurigii. Waxay doonayeen inay ogaadaan haddii aan weli halkaas joogo iyo haddii aan meel kale aaday.
Talibaan aad ayay ii garaaceen ilaa uu dhabarkaygii yeesho calaamado. Markii ay waalidkeeygu arkeen midaasna hooyadeey waxay biloowday inay ooyso, oo waxay igu tiri halkaas ha ku noqon. Aabahay ayaa waxa uu weydiiyay sababta aay wiilkiisa u raadinayaan. Maalin ayuu waxa uu qaatay hubkiisii si uu ula soo dagaalamo. laakiin waxay doonayeen inay isaga dilaan markaasuu inta uu gurigii ku soo noqday albaabkiisii hoosta ka xirtay.
Talibaan intii aysan imaan ka hor waxaanu haysanay xornimo buuxda, waanu cayaari jirnay iyo iskuul dhigan jirnay. Wax xanibaad ahna nama aysan saarnayn. Subaxii iyo habeenkiiba waxaanu cayaari jirnay cayaaro, iyo waxaan la sheekeeysan jirnay saaxiibadeen. Waxaanu heesaha ka dhagaysan jirnay telefoonkeena gacanta. Wey mabnuuceen. Waxay naga joojiyeen inaanu waxba sameeyno. Waxay naga joojiyeen inaanu cayaarno cricket-ka iyo inaanu iskuul dhigano. Waxaanu dareemaynaa inaanu maxaabiis oo kale nahay.
Anigu waxaan doonayaa inaan ku biiro ciidamada sababtoo ah waxay difaacayaan dhulkeena. Waxay u dagaalamayaan sabab sax ah. Anigu waxaan doonayaa inaad dagaal la galo Talibaan. Anigu ujeedo kale ma lihi aan ka ahayn inaan difaaco dhulkeena. Talibaana waa in la baabiyaa.
Anigu waxaan doonayaan inaan u sheeg Talibaan inay yihiin wax aan naxariis lahayn, waxa ay igu sameeyeen ay ahayd cadaalad daro. Anigu ma aan dili karo dad muslim ah oo aan waxba geysan.
Anigu kama aan cabsanayo ayaga.